Emmerson Mnangagwa to head Zimbabwe - Zanu-PF chief whip | News24
Zimbabwe — Zimbabwe's Robert Mugabe resigned as president with immediate effect on Tuesday after 37 years in power, shortly after Parliament began impeachment proceedings against him.
READ: 'I Robert Mugabe tender my resignation'
Ruling party chief whip Lovemore Matuke told The Associated Press that recently fired Vice President Emmerson Mnangagwa would take over as the country's leader within 48 hours. Matuke said Mnangagwa, who fled the country after his firing, "is not far from here".
Matuke said they look forward to Mugabe doing the handover of power "so that Mnangagwa moves with speed to work for the country".
READ: Mnangagwa calls Parliament the 'ultimate expression' of Zimbabweans' will as Mugabe impeachment looms
???? Zimbabweans celebrate in the streets of Harare ????#MugabeResigns pic.twitter.com/U5fh0QvLkJ
READ: Zuma, Angolan president head to Zimbabwe on behalf of SADC